एक मिनेटका लागि घण्टाैँ समस्या झेल्दै लगानीकर्ता,के गर्दैछ सिडिएससी? - DURBAR TIMES
HomeEconomyएक मिनेटका लागि घण्टाैँ समस्या झेल्दै लगानीकर्ता,के गर्दैछ सिडिएससी?
एक मिनेटका लागि घण्टाैँ समस्या झेल्दै लगानीकर्ता,के गर्दैछ सिडिएससी?
हिजाे मंगलबार बिहानैदेखि शेयर काराेबार गर्ने सफ्टेवेयर मेराेशेयरले काम गर्न छाड्याे । शेयर बिक्री गरेपछि इडिआइएस गर्नुपर्ने लगानीकर्ताहरू निकै हतास देखिए । समयमा शेयर ट्रान्सफर गर्न सकिएन भने २० प्रतिशत क्लाेज आउट जरिवाना तिर्नुपर्ने नियमले गर्दा लगानीकर्ताहरू समस्यामा देखिए ।
साँझपख मेराेशेयरले वेवसाइट तथा एप्लिकेशनमा समस्या देखिएकाे र समाधानकाे प्रयास गरिरहेकाे सूचना प्रदान गर्याे । साथै १६ गते शेयर बिक्री गरेका लगानीकर्ताहरूका लागि इडिआइएस गर्ने समय थप गर्याे ।
याेभन्दा पहिले पनि मेराेशेयरमा बारम्बार समस्या आउने गरेकाे थियाे । पहिले पनि लगानीकर्ताहरू चिन्तित बन्ने गर्थे । याेपाली भने सिडिएससीले समस्या समाधानका लागि सर्भर अपग्रेड गर्दै गरिएकाले अब समस्या अआउने बतायाे ।
एक मिनेटमा हुने शेयर ट्रान्सफर गर्न मंगलबार लगानीकर्ताहरूलाई धेरै समयसम्म रिफ्रेस गरेर बस्नुपर्दा धेरै झन्झट ब्यहाेर्नुभयाे । धेरै अघिबाट नै मेराेशेयरकाे ड्यासबाेर्डमा समस्या देखिएकाे थियाे । एक समस्या समाधान गर्न नभ्याउँदै अर्काे समस्या देखा परेपछि प्रयाेगकर्ताहरूकाे आक्राेश लगातार खेपिरहेकाे छ मेराेशेयर ।
Previous articleअजाेड इन्स्याेरेन्सविरूद्ध इन्साडर ट्रेडिङ गरेकाे आराेपमा उजुरी
Next articleओम्नी घोटाला : तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सिफारिस